मौसमको पूर्वसूचना दिने राडार सञ्चालनमा आउन सकेन
सुर्खेत- जनशक्ति अभावका कारण अत्याधुनिक प्रविधिको मौसमको पूर्वसूचना दिने राडार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विश्व बैंकको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वीरेन्द्रनगर–१४ स्थित रातानाङला डाँडामा नेपालमै पहिलो मौसमी राडार स्थापना गरिएको हो । नमूनाका रूपमा नेपालमा पहिलोपटक निर्माण गरिएको सो अत्याधुनिक प्रविधिको राडारमा पर्दछ । राडार ११७ फिट अग्लो छ ।
राडारले दिने सूचना छिटो ग्रहण गर्न कोहलपुरभन्दा सुर्खेतमै कार्यालय राख्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट) का प्राज्ञ डा मदनलाल श्रेष्ठ राडारबाट हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ ।
“मौसमसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि राडारले दिन्छ नै, हवाई दुर्घटना रोक्न पनि यसको महत्व उत्तिकै छ”, डा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उदाहरणका लागि जुम्ला र सुर्खेतमा मौसम सफा छ, तर हवाई मार्गका बीचमा के–कस्तो मौसम छ भन्नेबारे विमानस्थलको टावरलाई थाहा हुँदैन, यस्तो अवस्थामा सूचना लिने यही राडारबाट हो, यसले हवाई मार्गका बीचमा कहाँ कति बादल छ ? वा वर्षा के भइरहेको छ ? भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन्छ ।”
सरकारले उदयपुरको उदयपुरगढी र पाल्पाको रिब्दिकोटमा पनि यस्तै प्रकारको मौसमी राडार राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यहाँ निर्माण गरिएको राडार समुन्द्री सतहबाट दुई हजार २४४ मिटर उचाइमा अवस्थित छ ।